Nicholas Kay Oo manta kulaabtay Gurigisa Kadib markii ay shaqada kadhamaatay +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Nicholas Kay Oo manta kulaabtay Gurigisa Kadib markii ay shaqada kadhamaatay +Sawirro
Ergaygii Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay ayaa si rasmi ah uso gabagabeeyay shaqadii uu ka hayay Soomaaliya,ka dib muddo laba sano ka badan oo uu Wakiil Qaramada Midoobay uu uga ahaa Soomaaliya.
Ka hor inta uusan ka ambabixin Muqdisho ayaa waxaa xaflad kooban loogu qabtay Garoonka Aadan Cabdulle Cismaan,taasi oo ay ka qayb galeen saaxiibadii la shaqaynayay iyo Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Abdusalam Hadliye Omar.
Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Abdusalam Hadliye Omar ayaa Nicholas Kay ku sheegay inuu ahaa saaxiib dhab ah oo ay leeyihiin Soomaalidu,kaasi oo aan la ilaawi karin taariikhda uu Soomaaliya ku leeyahay.
Wuxuu sheegay in Nicholas Kay uu Soomaaliya ka caawiyay sidii ay dawlada Soomaaliya iyo shacabkeedu u gaari lahaayeen himiladooda.
Ergaygii hore ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay in Soomaaliya ay xusuusta niyadiisa ku jiri doonto,wuxuu sheegay in uu aad u faraxsan yahay horumarka ay Soomaaliya ka samaynaysoay Dimuqraadiyada, Dib-u-dhiska, Xasiloonida Nabadeed, halka oo uu sheegay inaysan joogin saddex sano ka hor.
Nicholas Kay ayaa waxaa badalaya Ergayga cusub Michael Keating, kaasi oo dhowaan loso magacaabay Soomaaliya.